EAP380-E SMB Smart Ime ụlọ 802.11ac wave2 Dual Band AP
DCN EAP380-E bụ ebe nweta ikuku (AP) emere maka ahịa SMB. Ọ na-enye ike nkwado ọrụ zuru oke ma na-egosipụta ntụkwasị obi dị elu, nchekwa dị elu, ntinye ntanetị dị mfe, nchọpụta AC na nhazi akpaka na nhazi, na njikwa na ndozi oge, nke na-ezute nfe nkesa ntanetị dị mfe. AP na-agbaso ụkpụrụ 802.11ac na-agbaso ụkpụrụ 2 ma nwee ike ịnye ihe kachasị 1.167Gbps - 300Mbps na 2.4G na 2 × 2, 867Mbps na 5G na 2 × 2. Ndị ...
EAP280-E SMB Smart Ime ụlọ 802.11n Single Band AP
EAP280-E bụ ụlọ ọrụ Wi-Fi AP (Access Point) ọhụụ bara uru nke DCN gosipụtara. AP a kwadoro ọkọlọtọ 802.11n na njikọta Mega Ethernet. EAP280-E na-arụ ọrụ na bandị 2.4G na ntinye kachasị nwere ike ịbụ 300Mbps. EAP280-E na-enye arụmọrụ dịgasị iche iche nke redio, mkpanaka, nchekwa na injinia okporo ụzọ wdg, nwere ike ịrụ ọrụ na igwe ma ọ bụ igwe ojii AC (Access Controller) iji nye ụlọ ọrụ, ogige Wi-Fi na ntanetị yana ụlọ klas dijitalụ, Wi-Fi azụmahịa. ...
EAP220 Smart 802.11ac Dual Band Na-mgbidi Ikuku AP
EAP220 nwere ike itinye ya na nhazi x86 ọkọlọtọ, na-enweghị nwughari mgbidi iji chekwaa ego na oge, ma kpuchido mma mbụ. EAP220 na-akwado 802.11AC standard2.4G na 5G band, ma na-akwado bandwidth wireless kachasị elu nke 733Mbps. EAP220 na-enye otu ọdụ ụgbọ elu Ethernet 100M dị elu, otu ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet 100M na otu ọdụ ụgbọ mmiri RJ11. Ọdụ ụgbọ elu ahụ nwere ike ịkwado 802.3af POE, ya mere EAP220 ọ bụghị naanị na ọ nwere ike inye ọkwa WIFI dị elu, kamakwa ọ nwere ike ịnye ...
EAP180 Smart 802.11n Single Band Na-mgbidi Ikuku AP
EAP180 nwere ike itinye ya na nhazi x86 ọkọlọtọ, na-enweghị nwughari mgbidi mgbidi iji chekwaa oge na ego. EAP180 na-akwado ọkọlọtọ 802.11n ma na-arụ ọrụ na band 2.4G, nwere ike inye bandwidth 300M. EAP180 na-enye ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet nke 1 * 100M, otu ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet 100M na otu ọdụ ụgbọ mmiri RJ11. Site na ọdụ ụgbọ mmiri na-akwado 802.3af POE, EAP180 na-enye ọ bụghị naanị mkpuchi mkpuchi WiFi dị elu, kamakwa mgbakwunye njikọ wired na njikọ ekwentị. Key Atụmatụ na Highlights Easy t ...
EAP380-L SMB Smart Ime ụlọ 802.11ac Dual Band AP
EAP380-L bụ ụlọ ọrụ Wi-Fi AP (Access Point) ọhụụ bara uru nke DCN gosipụtara. AP a na-akwado ọkọlọtọ 802.11ac na 802.11n na Mega Ethernet upstream Njikọta. Usoro kachasịsị nke jikọtara ọnụ nwere ike ịbụ 733Mbps. Igwe redio 2.4GHz na-akwado ọkọlọtọ 802.11n site na ntinye aka 300Mbps; redio 5GHz na-akwado ụkpụrụ 802.11ac na ntinye aka 433Mbps. EAP380-L na-enye vasatail arụmọrụ nke redio, mobile, nche na okporo ụzọ injinịa wdg, ọ nwere ike na-ahụ ...